Iphepha elinoLwandle oluLungeleleneyo lwePinki kunye neZip kunye neekona eziManyeneyo, iTshintshi yeThayile yePinki enesinxibo kunye neZipper kunye neeKona zeeTeyile abavelisi, abaThengisi, abaFektri - iZhejiang Rancho Santa Fe Home Textile Co., Ltd
Inani Model: F29072
● QAPHELA INQAKU ELIQHELEKILEYO LOKUQHUBA: Yenza ipateni entle kunye neyodwa. Isimbozo sepintuck duvet sisebenzise kwigumbi lakho lokulala, kwigumbi leendwendwe, kwikhaya leholide okanye kwenye indawo! Kwakhona wenza ISIPHO ESIKHULU semitshato, imihla yokuzalwa, iiholide kunye nokunye.
● QHUBA NGOKUGQIBELA NOKUVALWA KWEZIPPER
● I-PINCH IPLEYI UYILO: Lala kubunewunewu nge-3-Piece Pintuck Textured Bedding Duvet Cover kunye ne Shams. Iseti inombhalo obhalwe ngombala, i-pintuck eneenkcukacha ezintle ezihambelana nomgangatho ombala oqinileyo, okwenza le-pinch pleat duvet igubungele udibaniso olukhulu kulo naliphi na igumbi lokulala.
Ukunyaniseka kwesitayile sentombazana ehlazileyo epinki ye-HF29037